RDT र PCR टेस्ट : कसरी आउछ एउटा टेस्टबाट पोजिटिभ र अर्को टेस्टबाट नेगेटिभ?(भिडियोसहित) – NamoBuddha Khabar
RDT र PCR टेस्ट : कसरी आउछ एउटा टेस्टबाट पोजिटिभ र अर्को टेस्टबाट नेगेटिभ?(भिडियोसहित)
बुधबार, बैशाख ०३, २०७७ | १४:२८:४४ |
कोरोना भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेपछि भाइरस मानिसको घाँटीमा गएर बसेको हुन्छ । त्यो घाँटीको न्याजोफ्यारिंस वा आरोफेयारिंस मा गएर बसेको हुन्छ र त्यो भाइरस घाँटी हुदै फोक्सोमा गएर निमोनिया गराएको हुन्छ । जब हाम्रो शरीरमा संक्रमण गर्छ शरीरले त्यो भाइरसलाई नष्ट गर्नका लागि एकप्रकारको प्रोटिन(एन्टिबडि¬) बनाएको हुन्छ यो दुई प्रकारको हुन्छ इम्यूनोग्लोबोलिन एम र इम्यूनोग्लोबुलिन जी ।
सुरुमा बन्ने अस्थायी किसिमको, थोरै बन्ने इम्यूनोग्लोबुलिन एम हो । यो बन्नलाई ७ दिन जत्ति लाग्छ । यो पछि बिस्तारै हराएर जान्छ । पछि बन्ने एन्बिडि जी हो । यो हाम्रो शरीरलाई पूर्णरुपमा सुरक्षाका लागि, दीर्घ वा लामो समयसम्म काम गरेको हुन्छ । एन्टिबडि हाम्रो रगतमा पाईन्छ ।
कुनै पनि भाइरसलाई हाम्रो शरीरबाट निकालेर भाइरस शरीर भित्र छ भनेर देखाउन सक्ने विधि पिसिआर विधि हो ।भाइरसलाई पत्ता लगाउनका लागि नमुना संकलन गर्दा सामान्यतया भाइरस बस्ने ठाउँबाट लिनु पर्दछ त्यो भनेको घाँटी हो, नाक वा मुखबाट निकाल्न सकिन्छ र अर्को भनेको निमोनिया भएको छ भने फोक्सोबाट हो । मुखबाट लिएको नमुना भन्दा नाकबाट लिएको नमुना राम्रो हुन्छ । नमुना संकलन गरि सकेपछि पिसिआर मेसिनमा राख्छौ पिसिआर मेसिनले कोरोना भाइरसको जैविक तत्व आरएनए छ कि छैन भनि पत्ता लगाउछौ । यदि नमुना ( थ्रोड स्वाब) मा आरएनए भएमा कोरोना पोजिटिभ र छैन भने नेगेटिभ नतिजा देखाउछ । यो टेस्ट महँगो हुन्छ , विशेष किसिमको प्रयोगशालाको आवश्यकता पर्दछ ।
आरडिटि (रयापिड डाईग्नोष्टिक टेस्ट)
कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि हाम्रो शरीरले भाइरसको विरुद्धमा एन्टिबडि बनाएको छ कि छैन भनि पत्ता लगाउछौ त्यो टेस्टलाई आरडिटि टेस्ट भनिन्छ । एन्टिबडि रगतमा हुने भएकोले यो टेस्टका लागि नमुना लिदा व्यक्तिको रगतलाई निकाल्छौ । यो किटमा गर्ने टेस्ट हो । यो टेस्ट सस्तो ,छिटो नतिजा निकाल्न सकिन्छ ।
यी मध्ये दुबै टेस्टहरुले गलत नतिजा दिन सक्छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणको पुष्टिका लागि भाइरस प्रवेशको सुरुको चरणमा पिसिआरमा पोजिटिभ नतिजा देखाएको हुन्छ । पिसिआर पोजिटिभ भएमा मात्र आरडिटि पोजिटिभ आउछ । किनकी पिसिआरबाट भाइरसलाई पत्ता लगाउछ भने आरडिटिबाट एन्टिबडि पत्ता लगाउछ । शरीरमा भाइरसको प्रबेश भएपछि मात्र शरीरले एन्टिबडि बनाउछ । भाइरसको संक्रमण गरेको लामो समय भएपछि एन्टिबडिको कारण भाइरसलाई नष्ट गरेको पनि हुन सक्छ त्यो अवस्थामा पिसिआरबाट परिक्षण गर्दा नेगेटिभ नतिजा र आरडिटिबाट परिक्षण गर्दा पोजिटिभ नतिजा देखाउन सक्छ ।
टेस्ट सेन्सेटिभिटि भनेको के हो?
कुनै पनि टेस्टले पोजिटिभ केसहरु मध्ये कतिलाई पोजिटिभ केस हो भनि देखाउन सक्ने क्षमतालाई टेस्टको सेन्सेटिभिटि भनिन्छ । जस्तै यदि १०० वटा कोभिड १९ को केसहरु मध्ये कुनै टेस्ट क ले ७० वटालाई मात्र पोजिटिभ केस हो भनि देखाउन सक्छ र बाँकी केसलाई औल्याउन सकेन भने टेस्ट क को सेन्सेटिभिटि सत्तरी प्रतिशत र अर्को टेस्ट ख ले ति १०० वटा कोभिड १९ को पोजिटिभ केसहरुलाई ३० वटा केसहरु पोजिटिभ र बाँकी ७० वटा नेगेटिभ केस भनेर देखायो र बाँकी सत्तरी वटा केसहरुलाई औल्याउन सकेन । ख टेस्टको सेन्सेटिभिटि तिस प्रतिशत मात्र हुन्छ । त्यसैले बिरामीलाई कुन परिक्षण (टेस्ट) विधिबाट परिक्षण गरेको भन्नाले पनि नतिजामा फरक पर्दछ । परिक्षण विधि छान्दा धेरै सेन्सेटिभिटि भएको टेस्ट रोज्नु पर्छ ।
पिसिआर टेस्टको सेन्सेटिभिटि भाइरस लागेको सुरुमा धेरै छ र बिस्तारै घट्दै जान्छ किनकी शरीरले भाइरसलाई मार्नका लागि एन्टिबडि बनाएको हुन्छ । त्यसैले पिसिआरबाट परिक्षण गर्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई कोरोना भाइरस लागेको सुरु मै परिक्षण गर्यो भने पोजिटिभ र दुई तिन हप्ता पछि परिक्षण गर्यो भने नेगेटिभ देखाउछ ।
आरडिटिबाट टेस्ट गर्दा यदि कोरोना भाइरस लागेको सुरुको अवस्थामा हो भने यो विधिबाट परिक्षण गर्दा नतिजा नेगेटिभ आउछ । यो टेस्टबाट एन्टिबडि परिक्षण गर्ने हुनाले शरीरमा भाइरस प्रवेश गरेको ७ दिन पछि मात्र एन्टिबडि बनाएको हुन्छ । र बिस्तारै एन्टिबडि बढ्दै जानले मानिसमा भाइरस प्रवेश गरेको दुई हप्ता तिरको अवस्थामा यो विधिबाट परिक्षण गर्दा नतिजा पोजिटिभ देखाउछ ।
कसरी आउछ एउटा टेस्टबाट पोजिटिभ र अर्को टेस्टबाट नेगेटिभ?
पहिलो कुरा त्यो टेस्ट कुन विधिबाट गरेको हो ? पिसिआर विधिबाट वा आरडिटि विधिबाट ।
किनकी पिसिआरबाट टेस्ट गर्दा शरीरमा भाइरसले प्रवेश गरेको सुरुको अवस्थामा पोजिटिभ आउछ र बिस्तारै नेगेटिभ नतिजा आउछ ।आरडिटिबाट टेस्ट गर्दा भाइरस प्रवेश गरेको सुरुको चरणमा नेगेटिभ नतिजा आउछ र पछि विस्तारै पोजिटिभ आउछ ।
दोस्रो कुरा संक्रमणको कुन चरणमा टेस्ट गरेको हो ?
लक्षण देखिएको पहिलो हप्तामा टेस्ट गरेको हो वा पछिल्लो हप्तामा टेस्ट गरेको हो ।
कोहि संग सम्पर्क भएको छ वा छैन अर्थात संक्रमित संगको सम्पर्क भएको वा नभएको । कत्ति समय भयो संक्रमित संगको सम्पर्क
यी तिन अवस्थाबाट मात्र सो व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावना विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
Coronavirus(COVID-19)/कोरोना भाग:16Coronavirus पत्ता लगाउन गराइने test हरु केके हुन्?RDT र PCR भनेको के हो?किन कुनै test positive आउछ अनि अर्को negative! बुझ्न पर्ने कुरा के हो?https://youtu.be/bF_l3rbevgI
Gepostet von Dr. Augraj Uprety / डा. अग्रज उप्रेती am Dienstag, 14. April 2020